Hodiovina amin’ny alalan’ny asa tana-maro ny Vallon de Metzinger ao Mahajanga. Iandraiketan’ny Fid ny fandaminana izany. Manodidina ny 150 ireo fokonolona hanatanteraka ny asa avy amin’ny fokontany manodidina. Sandaina 5 000 Ar isan’andro ao anatin’ny 20 andro izy ireo amin’izany asa tana-maro hataony izany. Efa nidina ifotony ny teknisianina avy amin’ny Fid nijery ny fomba hanatanterahana ny fanadiovana rehetra.
Efa tonga ao Mahajanga ny fanampiana ireo traboina vokatry ny fiakaran’ny rano tany an-toerana. Nozaraina tao amin’ny EPP Fiofio amin’ireo fianakaviana 500 traboina izany. Nahitana vary, menaka, siramamy, voamaina ary fitaovana fitatavana rano ireo fanampiana nomena. Nisy ihany koa fitsaboana maimaimpoana ho an’ireo tsy salama. Tsy hadino ny kit scolaire ho an’ny mpianatra izay nahitana rakibolana ho an’ireo hanala fanadinana.
Manoloana ny firongatry ny aretina tazomoka ao amin’ny distrikan’Ambatondrazaka sy Amparafaravola, nanentana ny vahoaka amin’ny fampiasana lay misy odimoka ny tompon’andraikitra. Nanentana ny amin’ny tokony hanaton’ny marary tobim-pahasalamana haingana ihany koa izy ireo. Nisy ny fihaonan’ny talem-paritry ny fahasalamam-bahoaka Alaotra Mangoro, ny “médecin inspecteur” Ambatondrazaka, ny “médecin inspecteur” Amparafaravola, ny tompon’andraikitry ny ady amin’ny tazomoka faritra Alaotra Mangoro nandrindrana izany fanentanana izany.